Umda wexeshana, yintoni na?
Ukugwetywa kwentombazana ngenxa yokungaziphathi kakuhle kwakhe "uye waqhelana kwaye isondele ngokuqhelekileyo. Abantu abaninzi abadala, bazikhumbula ngokwabo ngeli xesha elibalulekileyo ekubunjweni kobomi, bajonge ngokwaneliseko olukhulu, bachaza ngoku "kuba ubomi babunzima." Kodwa ngokuqhubekayo beqhubeka nokuphatha umntwana wabo ngeenkcukacha ezahlukeneyo kunye neemfundiso, kwaye akayena mnandi ngaphandle kwabo.
Kodwa lo mfana, ngokoqobo ngokwenene la magama, ngoku ngoku kunceda kakhulu abazali. Ukuba ngoxa wayesengumntwana, wayefuna ukunakekelwa kunye nothando, ngoku sifuna ukuqonda, ukuvunywa kunye nokungaqondi kakuhle kwezinto ezenzeka kuye nakwihlabathi lakhe.
Ngalesi sikhathi kumntwana wakho akukho nto isigxina, iziphepho ze-hormonal zitshintsha umzimba wakhe kwaye zitshontshe ingqondo, ekulungele ukupheka kwinto yokuba ilizwe eliqhelekileyo nelikhululekile ngandlela-thile liye layeka ukuba njalo. Kwimeko yenguqu, umntu ufumene - "I" wakhe, ukunyaniseka nokunyaniseka, ukukwazi ukuphonononga ngokukodwa iziganeko kunye nezinto, kwaye angathembekanga ngombono weziphathimandla zibekwe kwaye ziphuhliswe.
Umda wexeshana, yintoni na, yiziphi izinto ezenziwayo?
Okokuqala: kukukhula komzimba.
Ngaphakathi kwentsha yonke into ibilisa kwiimvakalelo kunye nemvakalelo eyahlukileyo, abaninzi kubo kude kube lo mzuzwana engazange azive nhlobo, kwaye abo babonakala baziwayo bafumana ubukhali obungalindelekanga. Eyona nto eyona nto ingoyikiyo, ngamanye amaxesha ayifumananga.
Ukoyika ukungabi njengaye wonke umntu, ukungabi buthathaka, yingakho umfana engathethi noontanga ngeengxaki zakhe. Uyesaba ukugxeka abantu ngezizathu ezahlukeneyo, ngoko, naye akafuni ukuthetha nabo. Uzama ukubanyusa njengeyona nto ebangela ukwesaba kwabo.
Intombazana iqala ukufuna ngamandla kwiinkampani zontanga - emva kwayo yonke into, zifana kwaye zikunceda ukuba zingaphumi kwesi sihlwele, unokwazi ukubheka njalo ukuba ziphi kunye nendlela abazisebenzisa ngayo ukukopisha ukuziphatha ebuntwaneni. Kodwa ihlabathi elijikelezile liqulethe izilingo ezininzi, kwaye ngaphandle kokulawulwa komntu omdala umntwana ozama ukuzama.
Umsebenzi wabazali ngethuba lixesha lokunyamekela umntwana wabo, kodwa kungekhona ukulawula ngokupheleleyo, kuya kuba nzima kakhulu. Ungazifundeli iinkcazo, kodwa uxoxe ngokukhawuleza malunga nento eyenzekayo kuye, uchaza oku kwaye ubonise inkxaso.
Ukwamkelwa kweqiniso lokukhula kwabo ngokwesondo.
Le yinkqubo enzima ngokwenene. Umntwana owayesakuba ngumntwana ngokukhawuleza ufumanisa ukukhanga okungaqhelekanga kumntu wesini esahlukileyo, ndifuna ukuthintela kwaye ndibone, ukuba ndifumanise ukuba bahluke njani. Kodwa oku akunakwenzeka, oku kugwetyelwa ngabantu abadala, oku kugwetyelwa ngabaontanga benomona ngesibindi. IiHormone zimnyanzela ukuba atshale ngesini esahlukileyo, ndifuna into entsha kwaye engaqondakali. Kwaye bonke abazungezile bazama ukufihla ukwesaba kwabo kunye nomona phantsi kokuhlekwa, okubuhlungu kakhulu. Kubalulekile ukuba intombazana ifunde ukugxeka ukuhlaselwa okunjalo kwidilesi yakhe, ukufunda ukuqonda ukugxekwa kungekhona nje isizathu sokumisa umoni kumphunga, kodwa njengesiganeko sokucinga.
Ukukhula komntu kunye nokukhululwa komzali.
Phakathi kwala bantwana abaselula njengokuba yena ngokwakhe, umntwana wakho uhamba ngokuthe ngcembe ukusuka kumntwana ukuziphatha ukukopisha kumntu omdala, umzekelo wokuziphatha ozimeleyo. Ufunda ukuba uxanduva lwezenzo zakhe kwaye ngokuqinisekileyo enze izigqibo kunye noxanduva. Into eyasetyenziswa ukuba ngumdlalo wembopheleleko ngoku ibe yinyaniso yobomi. Kancinci, uphuma kubazali bakhe kwaye uqala ukuhlala ngokuzimela, ngengqondo yakhe.
Ukuvuthwa kwengqondo kunye nokukhethwa kobugcisa.
Kwezinye iindawo eziqhelekileyo, eziqhelekileyo zibuhlungu umfana ofumanisa ukuba iziphathimandla azikwazi ukuba zize zifuneke zilandele. Ukuba kufuneka uhlolisise yonke into athi "ukunyaniseka", okufuneka ukuba ucinga ngako.
Kancinci le ntombazana isenza isangqa esisigxina sezinto eziqhubekayo. Kuye ukuzaliseka kwexesha lakhe elizayo. Ekuqaleni, oku kukuphosa phakathi kweempawu ezahlukahlukeneyo kwaye zihlawulelwa kakhulu, kodwa ke uyazifumana.
Kwaye ekugqibeleni - yintoni ixesha lokutshintsha? Le ngenye yezigaba ekubunjweni komntu omtsha. Enye yezona zinto zakutshanje, oku kufunyanwa ngumntwana wakho kunye nokuzithemba. Oku kukuguqulwa kwabazali kwigunya elingenakukhunjulwa kwaye phantse unkulunkulu kumhlobo. Okanye utshaba. Konke kuxho mekeke kobuzwe bakho. Inhlanhla enhle.
Iingxaki zokulungelelanisa abantwana kwi-kindergarten
Isikolo: kutheni umntwana ekhala, akamvumeli unina
Iziganeko zeminyaka yesikolo esiprayimari
Hisque hisque his followingque his followingque his following followingqueque hisque hisqueque hisque hisqueque hisque hisque hisque hisque hisque followingque hisque followingqueque hisque followingquequeque hisqueque hisque hisque hisque hisqueque hisque hisque his hisque following hisqueque followingque followingqueque
Apple patties nge brandy
Indlela yokwenza iNwele yeNwele
Yiyiphi i-marinade ye-pigs shish kebab ekhethekileyo?
Ubuhlobo besilisa - luhlobo luni lokuhlaselwa kunye nendlela yokulwa nayo?
Imigaqo yokupakisha izinto kwi-backpack xa uhamba
Iinkcazo zokuziphatha kwamadoda
Iingcamango eziphezulu ezi-5 zendlela yokugqoka yasebusika yabasetyhini abangaphezu kwama-50
Ngaba kunokwenzeka ukukhulelwa xa uphazamisa ukulala?
Ukuhlanjululwa komzimba kunye nelami kunye negalikhi
Shish kebab kwi-oven ephuma kwingulube elwandle elenziwe ngegromegranate
Ukufakela okucacileyo kwindlela yokuqala yama-60 ukusuka ku-Elie Saab abaculi abazenzayo, i-step-by-step master class
Ukupheka i-sushi kunye nemiqolo ekhaya
Intombi yeKirikorov yasize uyise ukuba ahlole abadlali be-"Wave Wave"